Ciidamada Dalka oo burburiyay Saldhigyo Maleeshiyada Shabaab ay ku lahaayeen Shabeelada Hoose | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Dalka oo burburiyay Saldhigyo Maleeshiyada Shabaab ay ku lahaayeen Shabeelada Hoose
Ciidamada Dalka oo burburiyay Saldhigyo Maleeshiyada Shabaab ay ku lahaayeen Shabeelada Hoose
Muqdisho(SONNA) Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgala deegaano hoos yimaada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa burburiyay saldhigyo Al-shabaab ay ku lahaayeen qeybo kamid ah gobolkaas.
Al-shabaab ayaa fariisimo waxa ay ku lahayeen deegaanada Mushaani Janaale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa ay la kulmeen dagaalo goos goos.
Taliyaha ururka 26-aad ee guutada sedaxaad ee ciidamada xoogga dalka Gaashaanle sare Xasan Maxamed Abuukar (Xasan Jaamici) oo howlgalkaasi hoggaaminayay ayaa xaqiijiyay In ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay burburiyeen saldhigyo Al-shabaab ku lahayeen deegaanada Mushaani iyo Janaale ee gobolka Shabellaha Hoose.
“Intii ciidamada geesiyaasha ay ku jireen howlgalka waxaan halkaasi kula kulnay dagaal naf la caari ah oo Nabad diidka ay ku soo qaadeen ciidamada waxaana halkaasi Al-shabaab looga dilay tiro ka tirsan maleeshiyaadkaas dhaawacyana waa loo geystay,dibna waa loo celiyay”, ayuu yiri Xasan Jaamici.
Xasan Jaamici, ayaa Sidoo kale, xusay inta uu socday howlgalka lagu burburinayay fariisimaha Cadowga Al-shabaab ay kala Kulmeen weerar fashilmay waxa uuna sheegay taliyaha in dagaalka lagu dilay tiro ka tirsan nabad diidka Al-shabaab.
Previous articleXildhibaan Dalxa oo bogaadiyay dib u shaqeeynta Garonka Diyaaradaha Muqdisho xilliyada habeenkii
Next articleTrump oo soo saareya sharci cusub oo soo galootiga quseeya
Kooxda Daalibaan oo codsatay ka qaybgalka shirarka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay
Wasiiradda Arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kuwait oo kawada hadlay xiriirka labada dal